Sei Kunyora Chinyorwa
Zvinyorwa zvinogara zvine bhenefiti yekuputira misoro yavo nemazita ane mifananidzo ine simba kana tsananguro. Munzvimbo yedhijitari, izvo zvoumbozha kazhinji hazvipo. Zvese zvemukati zvinotaridzika zvakafanana muTweet kana Kutsvaga Injini Result. Isu tinofanirwa kubata zvakabatikana zvevaverengi zviri nani kupfuura vatinokwikwidza kuitira kuti ivo vapfuure-uye vawane zvirimo zvavari kutsvaga.
Pakati nepakati, zvakapetwa kashanu sevanhu vazhinji vanoverenga musoro wenyaya sekuverenga iyo kopi yemuviri. Paunenge wanyora musoro wenyaya wako, watora masendi makumi masere kunze kwedhora rako.
David Ogilvy, Kureurura kweMurume Wekushambadzira
Cherekedza ini handina kutaura sei kunyora clickbait, kana maitiro ekuita kuti vaverengi vangobaya. Nguva dzese iwe paunoita izvozvo, iwe unorasikirwa neyakaomeswa-yakavimbika kuvimba neako muverengi. Uye kuvimba ndicho chishuwo cheumwe neumwe mushambadzi anoshuvira kuita bhizinesi neako anotevera kuverenga. Ndosaka nzvimbo zhinji dzekudzvanya dzisiri kutengesa chero chinhu kunze kwenzvimbo yekushambadzira. Vanoda nhamba kuti vawedzere yavo shambadziro, kwete kuvimba kweavo vashanyi.
Salesforce Canada yakaisa pamwechete infographic, Maitiro Ekunyora Anesimba Misoro Inoda Kutariswa. Mariri, ivo vanotaura vachishandisa inotevera nzira.
SHINE Maitiro Ekunyora Mazita Akanaka
S - Iva chaicho pamusoro penyaya yauri kunyora nezvayo.
H - Iva kubatsira. Kupa kukosha kune vateereri vako kunowedzera kutenda kwavo uye kuvimba mauri sechiremera.
I - Iva pakarepo zvinonakidza. Generic kiyi-rakaputirwa mazita haarigure.
N - Iva nhau. Kana mumwe munhu akanyora chinyorwa chiri nani, goverana chavo uye chengetedza nguva yako!
E - Iva kufara. Kushambadzira taura uye indasitiri matauriro ari kuzoisa vateereri vako kuhope.
Iyo infographic inokurudzira CoSchedule's Blog Post Musoro Wenyaya Analyzer, iyo yakandipa B + pamusoro uyu. Ichi chibodzwa chaive chakakwirira nekuda kweiyo sei element. Iwo huwandu hwakazara hwakavakirwa pane yavo Emotional Kushambadzira Kukosha algorithm inofungidzira kuti musoro wenyaya uchagovewa sei zvichibva pamazwi anoshandiswa.
Imwe yakapusa yekunyengerera iyo vanyori vanyori vanoramba vachindiratidza iyo inoshanda ndeyekuputira zita rako kutenderedza izwi rekuti iwe kana rako zvekuti unomanikidzwa kutaura wakananga kumuverengi. Kutaura zvakananga kumuverengi wako kunoenderana neruzivo uye nekuvaka kubatana kwekukurumidza pakati pako nemuverengi wako, kukurudzira vaverengi vako kubaya-kuburikidza kuti vaverenge zvimwe zvese.
Tags: tinya-kuburikidza chiyeroclickbaitKubatanakufaraheadlineskubatsirasei kutikunyora sei zitasei kunyora mazitainfographicfadzanhausalesforcesalesforce canadatsvaga injini peji pejinyokaShinechaichotitleskunyora misorokunyora mazita
Maitiro Ekugadzira Yako yekutengera Ngakusiya Email Campaigns
Kunzwisisa NFC: Pedyo neMunda Kutaurirana
Jul 11, 2016 pa 9: 53 AM
Mazano makuru, Douglas! Unozivei? Ini zvakare ndinoshandisa maturusi akadai seHubSpot Topic Jenareta kana Blog Title Jenareta neBlogAbout - vanondibatsira kududzira musoro wenguva dzose mune zvekuti kubata vaverengi. Iwe unogona kuona mimwe mienzaniso yemusoro inogadzirwa nezvishandiso izvi pane yangu blog http://www.edugeeksclub.com/blog .
Nenzira, handina kunzwa nezve Headline Analyzer - ini ndichanyatso kuishandisa mune ramangwana.